Ubisi olunamanzi, ivanilla kunye nekhekhe lesiponji | Ukupheka kweKhitshi
Le khekhe lobisi olujiyeneyo, ivanilla kunye netshokholethi inokuba yinto enkulu Isidlo sakusasa ngeempelaveki. Yenziwe ngokulula kwaye inhlama ikhula eontini njenge volcano, ifezekise ikeyiki yesiponji ngaxeshanye nefuthe elibi.
El isiphumo esimabhali Kuyaphunyezwa ngokudibanisa iindidi ezahlukeneyo zenhlama kunye nangaphandle kwetshokholethi kwisimo esingaqhelekanga kwaye ubarhuqe ngentonga ye-skewer ukusuka esiphelweni ukuya esiphelweni sokwenza ii-eses. Ilula kwaye umphumo ofezekisiweyo unika ikhekhe imbonakalo enomtsalane. Yizame, awuyi kuphoxeka.
Ikhekhe lobisi olujiyileyo, ivanilla kunye netshokholethi ezinokuba sisidlo sakusasa kule mpelaveki. Icwecwe kwaye inamanzi ngaxeshanye, ikwanesiphumo esihle semarbled.
220 g. ubisi olunencindi
1 i-yogurt yogurt (okanye ithafa)
100 g. ioli yeoli yomnquma eyongezelelweyo
Imvulophu yegwele lasebukhosini
Sitshisa i-oven ukuya kwi-180º.
Sabetha esityeni amaqanda kunye neswekile eneentonga zombane de ufumane umxube ophuzileyo.
Sidibanisa ubisi olujiyileyo, iyogathi, ioyile ye-oliva enyulu kunye ne-vanilla essence nganye nganye, ukubetha ngeentonga emva kongezo ngalunye.
Siyahluza umgubo kunye negwele kwaye ngokuthe ngcembe ukudibanisa kwintlama ngoncedo lwe-spatula.
Sahlula isiqingatha sentlama kwesinye isikhongozeli esahlukileyo kwaye songeza amacephe amabini e cocoa umgubo. Sidibanisa kakuhle ukudibanisa umbala.
Gcoba okanye layisha ukungunda kwekhekhe ngephepha kunye Intlama siyigalela kumaleko; Uluhlu lokuqala ngaphandle kwecocoa kwaye ngaphezulu ngaphezulu ngecocoa, usasaza ngokungalingani. Ke ide igqitywe intlama.
Emva koko sazisa intonga ye-skewer kwenye yeephelo ide ichukumise isiseko kwaye sirhuqa ukwenza ieses kuyo yonke intlama ide iphele kwelinye icala lokungunda.
Bhaka phakathi kwemizuzu engama-35 ukuya kwengama-40 okanye de sihlabe nge skewer kwaye iphume yomile.
Susa kwi-oveni kwaye uyifudumeze imizuzwana embalwa ngaphambi kokuba uyisuse ekubumbeni. Kwirakhi ukugqiba ukupholisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Postres » Ubisi olunamanzi, ivanilla kunye nekhekhe yetshokholethi
Ibhanana isinamon smoothie